Waaxda Caafimaadka Dadweynaha ee Iowa ayaa diiwaangelisay seddex dhimasho oo kale gobolka oo dhan sa | KWIT
Gudoomiyaha gobolka Iowa Kim Reynolds ayaa carabka ku adkeeyay muhiimada ay leedahay talaalka intii lagu guda jiray shir jaraa'id oo ay saaka qabatay oo ay xitaa xirxiraysay shaashadeeda si ay mid u hesho.
Reynolds waxay tiri ilaa iyo hada 741,000 qaadasho ayaa looqaybiyay gobolka oo dhan, iyadoo kudhowaad 24% dadka kunool 18 sano iyo wixii kabadan ay helayaan uguyaraan hal dose. Iyo ku dhowaad 70% dadka 65 iyo wixii ka sareeya.
Saraakiisha caafimaadka Nebraska waxay diirada saari doonaan talaalka dadka waayeelka ah inta lagu gudajiro wajiga xiga ee jawaabta coronavirus-ka gobolka, oo ka bilaabi karta gobolada qaarkood dhamaadka bisha.
Gov Pete Ricketts wuxuu leeyahay gobolku wuxuu faray degmooyinka caafimaadka maxalliga ah inay siiyaan 90% daawooyinka ay heli karaan dadka degan inta udhaxeysa 50 ilaa 64 inta lagu jiro wajiga tallaalka ee soo socda. 10% soo hartay ayaa loo qoondeyn doonaa dadka da 'kasta leh ee qaba xaaladaha caafimaad ee jira.
Ricketts wuxuu leeyahay dhakhaatiirta lashaqeysa agaasimayaasha caafimaadka bulshada maxaliga ah ayaa go'aamin doona cida uqalma.